अमेरिकालाई रुसले दियो यस्तो चेतावनी, के गर्ला अमेरिका ? - ramechhapkhabar.com
अमेरिकालाई रुसले दियो यस्तो चेतावनी, के गर्ला अमेरिका ?
रुसले अमेरिकालाई आफ्नो हैसियतमा राख्न सक्ने क्षमता रहेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। विश्वको शक्ति राष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिकाले घृणा फैलाउँदै रुसलाई टुक्र्याउन खोजेको रुसका पूर्व राष्ट्रपति तथा सुरक्षा परिषद्का सहायक सेक्रेटरी दिमत्री मेडभेडेभले बताएका हुन्।
अमेरिकाले रुसलाई घुँडा टेकाउन रुसविरुद्ध नकरात्मकता फैलाउने काम गरिरहेको मेडभेडेभको भनाइ छ। ‘यसले काम गर्नेवाला छैन, रुससँग हाम्रा सबै शत्रुलाई उनीहरुकै स्थानमा ल्याउन सक्ने क्षमता छ’, उनले भने।
रुसले फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेसँगै अमेरिका र उसका युरोपेली तथा एसियाली सहयोगी मुलुकले निरन्तर रुसमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरिरहेका छन्। यससँगै रुस विश्वको अधिकांश अर्थतन्त्रबाट बाहिरिएको छ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने यो सैन्य आक्रमण नभई विशेष सैन्य कारबाही भएको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसको सुरक्षा चासोलाई चुनौती दिन थालेकाले यो कदम उठाउनु जरुरी रहेको उनले बताउँदै आएका छन्।
उनले युक्रेनमा रहेका रुसी भाषा बोल्नेमाथि पनि सरकारले नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। युक्रेनले भने पुटिनको दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै आएको छ।
यो पनि …युक्रेन युद्धबारे छलफल गर्न बाइडेन-सी वार्ता हुने
युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबारे छलफल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचआज टेलिफोन वार्ता हुने भएको छ।
युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सीको धारणा बुझ्न बाइडेनले टेलिफोन वार्ता गर्न लागेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। उनीहरुबीच आज साँझ टेलिफोन वार्ता हुनेछ। सोमबार इटालीको रोममा भएको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान र चिनियाँ उच्च कूटनीतिज्ञ याङ जिएछी बीचको भेटपछि बाइडेन र सीबीच कुराकानी गर्ने सहमति भएको थियो।
गत फेब्रुअरी २४ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छिमेकी युक्रेनमाथि सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेका थिए। अमेरिकाले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोध गर्दै अहिलेसम्मकै कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाएको छ।
अमेरिका युरोपेली देश रुसी आक्रमणको विरोधमा छन्। यी देशहरुले युक्रेनलाई हतियारसहित विभिन्न सहयोग गरिरहेका छन्। चीन भने अहिलेसम्म तटस्थ छ।